बिज्ञान प्रबिधि – Sudarshan Khabar
आईपीओ जारी गरेको मध्य भोटेकोसीको काम ७५ प्रतिशत सकियो, एक वर्षभित्रै उत्पादन थाल्ने लक्ष्य
आईपीओ जारी गरेको मध्य भोटेकोसीको काम ७५ प्रतिशत सकियो, एक वर्षभित्रै उत्पादन थाल्ने लक्ष्य २०७८ कार्तिक १४, काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको स मग्र निर्माण ७५ प्रतिशत सकिएको छ । २०७९ पुसभित्र सक्ने लक्ष्य राखी आयोजनाको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । आयोजनाको बाँध, बालुवा थिग्य्राउने पोखरीलगायतका […]
५३ करोड बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण बाहिरियो कतै तपाईंको त परेन ?
यही जनावरीमा केही ह्याकर्सले फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुका व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेका थिए। हालै ती सबै विवरण इन्टरनेटमा लिक भएको छ। सुरक्षा अन्वेषक एलोन गालका अनुसार ह्याकिङ फोरमका एक व्यक्तिले करीब ५३ करोड बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत विवरण लिएर सम्पूर्ण डाटा वेबमा सार्वजनिक गरेको छ। यी डाटाभित्र प्रयोगकर्ताका फोन नम्बर, जन्म मिति, इमेल ठेगाना, स्थान तथा अन्य […]
एजेन्सी उत्तर कोरियाले एउटा यस्तो मिसाइल तयार पारेको छ, जसले अमेरिकाको कुनै पनि शहरसम्म हमला गर्न सक्छ । उत्तर कोरियाको सरकारी मिडियाका अनुसार, शनिवार मिलिट्री परेडका बेला नयाँ इन्टरकोन्टिनेन्टल ब्यालेस्टिक मिसाइल लञ्च गरेको हो । डेली मेलमा छापिएको रिपोर्टका अनुसार यो शक्तिशाली मिसाइलको जानकारी पछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रुष्ट बनेका छन् । यो नयाँ […]
काठमाडौँ, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडिएससी)ले बुधवार मोबाइल एप लन्च गर्ने भएको छ। बुधवार पहिलो पटक सर्वसाधारणमा परीक्षणको लागि खुला गर्न लागिएको सिडिएससिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण प्रसाद आचार्यले बताए। “बुधवार हामी सर्वसाधारणमा परीक्षणको लागि खुला गर्दैछौँ,” आचार्यले भने। केही दिनको परीक्षण पछि नियमित रुपमा एपबाट सेवा प्रवाह हुने बताइएको छ। लगानीकर्ताको सहजताका लागि एप्स बुधवारदेखि […]
काठमाडौं । २०७५ फागुन २ गते एकान्तकुनामा सरकारले ‘पानीजहाज कार्यालय’ स्थापना गर्‍यो । कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘पानीजहाजको टिकट कहिले पाइन्छ भनेर केही महिना हामीलाई जिस्काउलान् तर केही महिना पर्खनुस्, टिकट पाइन्छ ।’ तर, कार्यालय खुलेको डेढ वर्षसम्म कानून बनाउने र जलमार्गको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छान्ने प्रक्रियासमेत सकिएको छैन । […]
एजेन्सी, चीनले विकास गरेको पुनः प्रयोग गर्न सकिने अन्तरिक्ष यान दुई दिनसम्म अन्तरिक्ष कक्षमा रहेर आइतबार सफलतापूर्वक पृथ्वीमा अवतरण गरेको छ । अन्तरिक्ष यात्रालाई सस्तो बनाउने सन्दर्भमा यो एउटा महत्वपूर्ण पाइला भएको चीन सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्त यान गत शुक्रबार जिक्वान भूउपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो । तर गोप्य रुपमा विकास गरिएको […]
इन्टरनेट स्लो छ ? स्पिड कति छ ? किन दिदैन भनेजति स्पिड ? कारण यस्तो छ
नेपालमा किन पाइँदैन भनेजति इन्टरनेट स्पिड कारण यस्तो छ नेपालमा इन्टरनेटको गति ज्यादै कमजोर छ । ग्राहकसँग सम्झौता गरेको जति इन्टरनेटको गति दिन सेवा प्रदायकहरु असफल छन् । इन्टरनेट चलाउँदा ब्राउजर फनफनी घुमेपछि ग्राहकले सेवा प्रदायकसँग गुनासो त राख्छन्, तर समाधान पाइहाल्दैनन् ।आफूले भनेजति इन्टरनेटको स्पिड पाउनु ग्राहकको अधिकार हो । तर, यसमा सेवा प्रदायकले […]
एसईई विद्यार्थीका लागि एनसेल आजियाटाले ल्यायो ‘पहिलो सिम’, यस्ता छन् सुविधा
काठमाडौ । एनसेल आजियाटा लिमिटेड (पहिले एनसेल प्राइभेट लिमिटेड)ले २०७६ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)का विद्यार्थीहरुका लागि विषेश अफर ‘पहिलो सिम’ ल्याएको छ । यो योजनामा एसईईका विद्यार्थीले मात्र रु १ मा प्रिपेड सिमको खरिदका साथै निःशुल्क माइफाइभ सेवा र बोनस डेटाको फाइदा लिन सक्नेछन् । यो योजना बिहीबार (भदौ १८)देखि लागू भएको छ । […]